Dhibaatooyinka kacsiga: Sababaha iyo Daaweynta | Ragga Stylish
Rag badan ayaa la ildaran dhibaatooyinka kacsiga. Waa waxtar in la ogaado in ay jiraan arrimo badan oo abuuri kara dhibaatooyinkan. Dhibaatooyin badan ayaa ku lug leh oo abuuri kara walaac iyo tan kicinta dhibaatooyinka kacsiga. Dhamaan qeybaha jirka waa inay wada shaqeeyaan si loo helo kacsi adag oo adag. Isbeddel kasta oo ku yimaada shaqooyinka wuxuu u horseedi karaa dhibaatadan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo laxiriira dhibaatooyinka kacsiga raga iyo waa maxay xalka ugu macquulsan.
1 Dhibaatooyinka kacsiga ee sababaha dibedda
2 Dhibaatooyinka kacsiga ee sababaha gudaha
Dhibaatooyinka kacsiga ee sababaha dibedda
Maskaxda ku hay in jirku u baahan yahay inuu si wanaagsan u shaqeeyo si loo abuuro kacsi wanaagsan. Dhibaatooyinka jireed iyo shucuureed labaduba waxay sababi karaan dhibaatooyin kacsi. Qaar ka mid ah sababaha dibedda waxaa u sabab ah dhibaatooyinka jirka iyo shucuurta labadaba. Aan aragno waa maxay xaaladaha ugu waaweyn ee kiciya:
Cudurada la xiriira cillad aan caadi ahayn: qaar ka mid ah cudurradan sidoo kale waa caadooyin la soo helay ilaa yaraantii. Xaaladaha wadnaha, dhiig karka, sonkorowga, xididada dhiigga oo xirmay, cudurka tayroodhka, khamriga, niyadjabka, iyo cilladaha habdhiska dareenka, iyo kuwa kale. Dhamaan xaaladahan iyo cuduradan waxay sababi karaan dhibaatooyin kacsi. Dhibaatada waa in laga xaliyo isha. Tusaale ahaan, caadeysiga cabitaanka khamriga waa wax ay tahay in laga fogaado.
Isticmaalka daawooyinka ka hortagaya shaqeynta saxda ah ee habka kacsiga: Mararka qaarkood waxaan qaadanaa daawooyin haddii rijeetadii hore ee takhtarka oo aanan ogeyn inay wax u dhimayaan shaqada saxda ah ee farsamooyinka dhaliya kacsiga. Tusaale ahaan, waxaa jira daawooyinka cadaadiska dhiigga oo sababi kara dhibaatooyin xagga kacsiga ah. Midka khaaska ah, waxaan ka helnaa beta beta, antidepressants, kaniiniyada hurdada, daawooyinka wadnaha iyo qaar ka mid ah oo lagu tilmaamay ulcer.
Sababta kale ee sababi karta dhibaatooyinka kacsiga waa mid jireed. Isticmaalka aalkolada, nikotiinka iyo kookaha ayaa sababi kara cawaaqibyadan. Dhaawaca laf-dhabarka iyo heerarka testosterone ee hooseeya ayaa sidoo kale dhici kara. Heerarkan hoose ee testosterone kaliya ma saameeyaan awoodda kacsiga, laakiin sidoo kale dareenka galmada ninka.
Dhibaatooyinka kacsiga ee sababaha gudaha
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, dhibaatooyinka shucuurta sidoo kale waxay abuuri karaan dhibaatooyin kacsi. Dhibaatooyinka kacsiga ee sababaha gudaha iyo shucuurta waxaan leenahay kuwan soo socda: diiqad, walaac, cabsi, xanaaq, dareen guuldarro ama hubanti la'aan. Nin had iyo jeer ku jira culeys, shaqo ama xiriir shaqsiyadeed, wuxuu kicin karaa dhibaatooyinka kacsiga. Lama wax la mid ah ayaa ku dhaca xaalad walaac ah.
Dhibaatooyinka kale ee ka soo jeeda gudaha laakiin ficil dibadeed ayaa ah dhibaatooyinka lamaanaha sida dhibaatooyinka wada xiriirka, rajooyinka galmada aan macquul ahayn, cunno aan caafimaad qabin, dhibaatooyinka dhaqaale ama qoyska. Xaaladaha badankood, mar kasta oo dhibaato ka timaad kacsiga dhalinyarada, badanaa waxaa sababa sababo xagga shucuurta ah. Sababaha jireed ayaa lagu eedeynayaa cillad aan caadi aheyn oo ragga ragga ah. Mid ka mid ah dhinacyada maskaxda lagu hayo waa haddii ay kacsadaan inta lagu jiro hurdada ama marka la kacayo, dhibaatooyinkaas waxaa laga yaabaa inaysan lahayn sabab jireed.
Aan aragno maxay yihiin xalka suurtagalka ah ee dhibaatada noocan ah. Inkasta oo astaamaha ugu weyn ay yihiin qanacsanaanta galmada, dhibaatooyinka isku kalsoonida ayaa sidoo kale loo aaneeyaa, taas oo saameyn ku yeelata xiriirka lamaanaha. Cilad aan caadi ahayn waxay astaan ​​u tahay jirro daran, sidaas darteed waxay kugula talineysaa inaad dhakhso u raadsato gargaar caafimaad. Waa muhiim in la ogaado in cilladan la daaweyn karo da 'kasta. Daawada caafimaadka iyo takhasuska leh waa lagama maarmaan, in kasta oo isbeddelada qaarkood ee qaab nololeedka ay tahay in sidoo kale la hirgeliyo.
Aan aragno qaar ka mid ah xalalka ugu waaweyn:
Isbedelada caadooyinka cunida: Waa lagama maarmaan in la kordhiyo cunitaanka khudaarta, la yareeyo isticmaalka aalkolada, la yareeyo caadada sigaarka, la yareeyo cunista hilibka cas iyo guud ahaan cuntada qashinka ah. Nafaqeeyayaalka yar yar, in kastoo cabirkoodu yaryahay, hadana waxay muhiim u yihiin shaqooyin badan oo jirka ah. Haddii cunnadu ku liito nafaqeeyayaalka yar yar, waxay u horseedi kartaa dhibaatooyin xagga kacsiga ah.
Ku dar jimicsi jimicsi wadnaha ah: maskaxda ku hay in sababta kale ay tahay wareegga oo xumaada. Ay ku jiraan jimicsiyada wadnaha iyo xididada dhiigga waxay ka caawin doonaan wareegga dhiigga ee jirka oo ay ku jiraan guska.
Samee jimicsi kegel ahLayligani waxay gacan ka geystaan ​​hagaajinta muruqyada pubococcygeus. Tan, waxaa suurtagal ah in la xoojiyo muruqyada kor u qaadi kara kacsiga.
Caawinta cilmu-nafsiga: mararka qaar dhibaatooyinka shucuurta ayaa ka xoog badan inta aan dooneyno. Xaaladdan oo kale, caawimaad nafsaani ah ayaa lagama maarmaan ah maaddaama, haddii aad ka yar tahay 40 sano jir, waxa ugu badan ee caadiga ahi yahay cillad aan caadi ahayn inay kacsato waa shucuur ama maskax ahaan
Daaweynta Hormonal: Waxay u heellan yihiin kuwa leh heerar testosterone hooseeya. Caadi ahaan heerarkan hoose ee eber testosterone waa inuu kugula taliyaa dhakhtar. Waxaa lagu dalbadaa irbado iyo kiniinno.
Daawooyinka Farmashiyaha: Waa la muujiyaa ilaa inta dhakhtar ku taliyo.
Cirbadda Intracavernosal: waa mid ka mid ah daaweynta caafimaad ee ugu isticmaalka badan si loo daaweeyo cillad la'aanta kacsiga. Waxay ku lug leedahay cirbadeynta daroogooyinka kala duwan ee ka caawiya kicinta howlaha jir ahaaneed ee la qaado si loo gaaro kacsi.
Daaweynta Transurethral: Waxay la mid tahay tan kor ku xusan, laakiin daawooyinka waxaa lagu marin karaa maxalliga ah kaadi mareenka.
Xaaladaha qaarkood oo keliya ayaa lagula talin karaa qalabka faakiyuumka. Qalabkani waa dhululubo caag ah oo la dul saaray guska si ay u qaadaan socodka dhiigga ee lagama maarmaanka u ah kacsiga. Farsamadan waxa ay qabato ayaa ah inay riixdo hawada oo ay abuurto nooc ka mid ah faakiyuumka. Dad badan ayaa u isticmaala galmada kahor inay si ku meelgaar ah u kordhiyaan cabirka xubinta taranka. Waa in la sheegaa in adeegsigaan laguugula talineynin gabi ahaanba maadaama ay dhibaato ku keeni karto godadka guska.
Ha iloobin in qodobka nafsiga ahi uu yahay kan ugu muhiimsan. Haddii aad ku xanuunsato cillad aan caadi ahayn, waa inaan lagaa badin. Wax walba waxay leeyihiin xal.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto dhibaatooyinka kacsiga iyo xalalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Dhibaatooyinka kacsiga
ED waa wax ka badan inta badanaa la fikiro iyo waxa raggu iska ilaaliyo la-tashiga. Waxa loo gudbiyey faallooyinka H c E waa mid sax ah oo isku xiran, inta badan marka loo eego qodobka nafsaaniga ah. Marka laga takhaluso sababta dabiiciga ah, waxaa lagama maarmaan ah in wax laga qabto diyaaradda nafsaaniga ah. Dhaqankeyga gaarka ah iyo tixraacyada cilmiyaysan waxaan ku aragnaa inuu jiro dib u dhac, +/- 4 sano, in la aado la-tashiga cilmu-nafsiga ee u dhigma PsychoAndrologist, oo ah cilmi-nafsi-yaqaan caafimaad oo u heellan daryeelka iyo daaweynta ninka. shaqadiisa maskaxeed, garasho, shucuur, galmo iyo taran.
Jawaab Dr. Lescano / www.doctorlescano.pe
Suudhka buluugga ah ee ragga